जिउँदा भूतहरूको भविष्य - Marganugami Daily
Marganugami Daily Interview जिउँदा भूतहरूको भविष्य
जिउँदा भूतहरूको भविष्य
Domain Registration Nepal प्रकाशित समय 2:05:00 AM
Domain Registration Nepal
राष्ट्रवादी त मरिचमान सिंह थिए । बीपी कोइराला आजीवन स्थायी सत्ताका लागि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ नै रहिरहे । लाग्छ, प्रधानमन्त्री कोइराला स्थायी सत्ताले बनाइदिएको बाटो पछ्याउँदै अस्ताउन अभिशप्त छन् ।
जीवनका गम्भीरतम विषयहरू टीकाटिप्पणी वा आलेखभन्दा बढी प्रभावशाली तवरले साहित्यमार्फत् व्यक्त भएको हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ । खासगरेर परिस्थिति एवं मनोभावबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्ने शक्ति परिकल्पित यथार्थमा मात्र हुन्छ । अंग्रेजी ‘मेटामर्फसिस’ शीर्षकमा प्रकाशित जर्मन लेखक फ्रान्ज काफ्काको लघु उपन्यास एक शताब्दी पुरानो भए पनि त्यसका पात्रहरूको सान्दर्भिकता अझै समसामयिक लाग्छ ।
कथाको मूलपात्र जीवनका बाध्यताहरूले थिचिएको एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसका कल्पान्तरण (मेटामर्फसिस) विशाल फट्यांग्रामा हुन्छ । र, उसले समयको रोगहरण क्षमता आफ्नो निस्सारताका बीच अनुभव गर्छ । अन्य पात्रका अनुभूतिहरूसँग निरपेक्ष प्रत्यक्षदर्शी अन्ततः छट्पटिँदै बिदा हुन्छ । काफ्काको त्यस सानो कृतिलाई अस्तित्ववाद वा फ्रायडवादजस्ता विभिन्न आलोचनात्मक विधि प्रयोग गर्दै समालोचकहरूले अर्थ्याएका छन् । सामान्य पाठकले ठम्याउने अर्थ भने एउटा मात्र हो असामान्य कुरा पनि सामान्य नै हुन् र अन्ततः ती पनि सकिन्छन् ।
हिजोआज देशको राजनीतिक तिकडी (ट्रायड) का कनिष्ठ साझेदार पुष्पकमल दाहालको अनुहार हेर्दा काफ्काको मेटामर्फसिसको मूलपात्र ग्रेगर सम्साको सम्झना हुन्छ । सम्साको व्यक्तिबाट फट्यांग्रामा कल्पान्तर रातारात भएको थियो । राजनीतिक तिकडीका तिकडमबाजलाई भने माओवादी सर्वेसर्वा दाहालबाट महेन्द्रवादी पुष्पकमल दाहाल हुन झन्डै एक दशक लागेछ ! समय त यो पनि बित्नै नै छ, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्ततः बिनाकुनै उपलब्धि विघटन हुन पुगेझैँ । सम्बन्धित पात्रहरूका कथा भने इतिहासभन्दा पनि त्रासदी एवं प्रहसनहरूमार्फत् प्रस्टिने छन् ।
तिकडीका अन्य तिकडमबाजहरू कम चाखलाग्दा छन् भन्ने होइन । तुलसी गिरीसँग राजपाटका चालबाजीहरू सिकेका सुशील कोइरालासँग भारतमा निर्वासनमा बिताएका वर्षहरूको कुण्ठाको ठूलै पोको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा जिम्मेवारी कुनै नलिने तर अधिकार भने जे पनि प्रयोग गर्न पछि नपर्ने बालुवाटार बसाइँको अहङ्कार पनि कम छैन । कुण्ठा र अहंकारको बोझले थिचिएको व्यक्तिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरियो भने जस्तो व्यवहार प्रकट हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री कोइरालाका गतिविधिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक निर्णय लिने जोखिम नउठाई स्थायी सत्ताका ताबेदारीका भरमा इतिहासमा नाम लेखाउने उत्कट चाहनाका परिणति उनी भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्रवादी त मरिचमान सिंह थिए । बीपी कोइराला आजीवन स्थायी सत्ताका लागि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ नै रहिरहे । लाग्छ, प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक बाटो आफै रोजेका होइनन्, स्थायी सत्ताले बनाइदिएको बाटो पछ्याउँदै अस्ताउन अभिशप्त छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा आउँदाजाँदा थरीथरीका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । एकथरी पुरुषलाई केपी ओलीका उखानटुक्का घतलाग्दा लाग्ने रहेछ । महिलाहरू भने प्रायः उनका अभद्रजस्ता लाग्ने अभिव्यक्ति रूचाउँदैनन् । नेकपा (एमाले) संविधान जारी भएदेखि विजयोत्सव मनाइरहेको छ । सरकारको उर्दी जारी गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू जम्मा पारिएको भीडलाई अध्यक्ष ओली ‘सम्बोधन’ गर्दैथिए । प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्दै गरेकी एक जना महिलाले विरक्तिएर टिप्पणी गरिन्– ‘भावी प्रधान मन्त्री अरे ! कस्तो खलासीजस्तो नेप्रिएर बोलेको । यस्तो बेला मधेश जानु पर्दैन ? ‘ सहायक चालक पड्कियो– ‘ए दिदी ! हाम्रो बेइज्जत नगर्दिनुस् त प्लिज । हामी हाम्रो जिम्मेवारी बुझ्छौँ ।’ जिम्मेवारी त सायद अध्यक्ष ओली पनि बुझ्छन् । कुरो केमात्र हो भने, उनको जवाफदेही जनताभन्दा स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध छ । आशा नजगाउनेले निराश पार्न पनि सक्दैन । कोइराला र ओलीले अपेक्षाभन्दा कम वा बढी केही गरेका छैनन् । तिनले बनाउने संविधान जस्तो हुनसक्थ्यो त्यस्तै बनेको छ । स्थायी सत्ताको घेरा नाघ्ने हिम्मत ओरालो लागेका राजनीतिकर्मीले गर्नसक्ने कुरा पनि भएन । पुष्पकमलले भने उल्लेख्य जनसमुदायलाई ‘प्रचण्डधोका’ दिएका छन् । उनलाई आश्रय दिएका मगर निराश छन् । काँधमा बोक्ने दलितहरू अलपत्र छन् । ज्यान अर्पण गरेर उनको राजनीति जोगाउने थारूहरूमा भागाभाग छ । मतपत्रको राजनीतिमा उनको अस्तित्व रक्षा गर्ने मधेशीहरू भटाभट मारिँदै छन् । उनी भने देशको ठूलो जनसमूहले जलाइरहेको संविधान जारी भएकोमा उत्सव मनाइरहेका छन् । यस्तो कल्पान्तरण कसरी सम्भव भएको होला ? व्याख्या अनेक हुन सक्छ । मुख्य कारण सम्भवतः ‘महेन्द्रपथ’को निरन्तर आकर्षण नै हो ।
कल्पान्तरणको श्रेणी भने काफ्काको कथाजस्तै विस्मयकारी छ । सन् २००५ सम्म सर्वेसर्वा दाहाल स्वयं माओवादीका मुख्यालय थिए । उनले सिलिगुढी, नोएडा, लखनउ, चण्डीगढ वा रोल्पाबाट जारी गरेका विज्ञप्तिहरूमा बाघको दहाड सुन्न सकिन्थ्यो । नयाँ दिल्लीका १२ बुँदे समझदारीरूपी पट्टा उनको घाँटीमा हालेर गिरिजाप्रसादले उनलाई काठमाडौं भित्र्याउँदासम्म उनको वजन र ओज कम भएको थिएन ।
संविधानसभापछि ‘प्रचण्ड’ फगत उपनाममा सीमित हुन पुग्यो । र, दाहाल बिरालो भए । उनले गर्जन गरे पनि उनको आवाज म्याउ म्याउ गरेजस्तो सुन्न थालिएको उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमै हो । कटुवाल काण्डपछि खाँवो चिथोर्नेमा सीमित हुनपुगेका उनको व्यक्तित्व सहानुभूति उब्जाउने खालको भइसकेको थियो । परिस्थितिले व्यक्तिलाई निरीह बनाउने रहेछ । मेरुदण्डविहीन बन्न तत्पर भने अस्तित्व जोगाउने चाहनाले रहेछ । आजभोलि स्थायी सत्ताका अगाडि चिप्ले कीराजस्तो घस्रिने प्रवृत्तिको उद्घोष भने महेन्द्रपथका बासी नाराहरूमा सुनिन थालिएको छ । भारतविरुद्ध लड्न सुरुङ प्रचण्डले खन्न लगाएका थिए । दाहाल साइकल चढ्ने धमास दिन्छन् । समयले कल्पान्तरण त गर्दोरहेछ ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरिएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको भए पनि नेपालको स्थायी सत्ताको आधारभूत प्रवृत्ति बदलिएको छैन । सार्वजनिक हितलाई बलि चढाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलन राणाकालमा पनि थियो । त्यसलाई परिष्कृत गरेर कूटनीतिको मूल चरित्रकै रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय भने राजा महेन्द्रलाई दिइनुपर्छ ।
भारतको विरोध गरेर नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्छ भने त्यस्तो व्यक्ति पक्कै अज्ञानीहरूको स्वर्गमा रमाइरहेको हुनुपर्छ । तर नेपालभित्र भारतविरोधी भावना भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रित राख्ने निहुँमा प्रशस्त मोलमोलाइ गर्न सकिने रहेछ । त्यस कलामा खास गरेर माले–मसाले–मण्डले जमात माहिर छन् । त्यसको मोल जनताले तिर्छन् । फाइदा भने स्थायी सत्ताले उठाउँछ ।
शीतयुद्धताका सार्वजनिक मञ्चमा जोरी खोजेर एकान्तमा लम्पसार पर्ने कूटनीति निकै सफल ठहरिएको थियो । सन् १९८९ पछि त्यस रणनीतिको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गएर अब लगभग समाप्त भइसकेको छ । अध्यक्ष दाहाल अरू जे भए पनि अबुझ पक्कै होइनन् । साइकल चढ्नु पर्यावरण र स्वास्थ्य दुवैका लागि राम्रो कुरा हो । सिंगापुर बन्ने सपनासँग भने त्यस्तो प्रण मेल खाँदैन । महेन्द्रपथको राजनीति गर्ने हो भने स्कुल, कलेज, अस्पताल वा उद्योगधन्धाभन्दा जंगल फँडानी र राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण विकासे राजनीतिको महत्वपूर्ण अवयव हो । मुक्तिको राजनीति गर्नेहरू संघीयता, समानुपातिकता एवं समावेशिताजस्ता कुरा बुझ्छन् । सिंगापुर सपना साकार गर्न त फलामे नियन्त्रण बेगर सम्भव छैन । आजभोलि त अर्थराजनीतिको त्यस्ता प्रारूपले एउटा नाम पनि पाएको छ– बेइजिङ कन्सेन्सस । महेन्द्रपथमा जस्तो एकदलीय व्यवस्था तत्काल सम्भव नदेखिए पनि चीनमा भएजस्तो एक वर्चस्वको बहुदलीय गठबन्धन नेपालको स्थायी सत्तालाई आकर्षक लागेको हुन सक्छ । त्यस प्रारूपभित्र दाहालले कुनै भूमिका पाउने खोक्रो आश्वासन उनले पत्याएको भए त्यसलाई अपरिपक्वताभन्दा पनि अतृप्त चाहना ठहर्या्उनुपर्ने हुन्छ ।
सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समुदायबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि पनि महेन्द्रपथकै अवयव हो । कुनै बेला डम्बरनारायण यादव, फत्तेसिंह थारु, हिरालाल विश्वकर्मा वा पद्मसुन्दर लावतीजस्ता राजनीतिक हस्तीहरूले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे । त्यही रणनीति पछ्याएर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहङ्कारमा अडिएको हो ।
भारत विरोधको राष्ट्रवाद विकासे अर्थराजनीतिमा आधारित कार्यनीति एवं प्रतीकको समावेशितामा चल्ने लोकतन्त्रका लागि उत्पात स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद, त्यसैका लागि जस्तोसकै भूमिकामा भए पनि दाहाल सत्ताको साझेदार हुन ओलीलाई काँध थापी रहेका छन् । विडम्बना के भने ओली स्वयं आफ्नो सम्भावना तुहाउन लागिपरेका छन् । मधेशीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुग्ने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन । जति नै दोहोर्‍यारए पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसक्तैन । त्यो कालखण्ड अब समाप्त भयो ।
मधेशीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुग्ने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन । जति नै दोहोर्‍यारए पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसक्तैन ।
राणा कालसम्म पनि पुरेतहरूको पजनी वा थमौती कुशे औंसीका दिन हुनेगर्थ्यो । स्थायी सत्ताको जजमानी कायम राख्नका लागि होला नयाँ पुरेतहरूले संविधानको कर्मकाण्ड दुई दिन सारेर कुशे औंसीकै दिन सुरु गरे । मधेशी मोर्चासँग वार्ता गर्ने बहाना त फगत आवरण थियो । पुरेत्याइँको धुर्त्याइँ टिक्न भने कठिन छ । जनार्दन अब जनता स्वयं छन् । र, आसेपासेलाई प्रदर्शन गरेर मधेशी, थारु वा मगरहरूको दाबीलाई निरन्तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । क्षमा मागेर अगाडि बढ्ने बाटो अझै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानबाट उद्घोष गर्नुपर्यो – नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन राज्य तथा सरकार प्रमुखले गरेका सम्झौताहरू स्वीकार्य छैन । उनले भन्नसक्नु पर्योब– मधेशका लागि जारी गरिएको पार्टीको घोषणापत्र छल थियो, प्रतिबद्धता थिएन । त्यसपछि उनले गर्ने काम राजनीतिबाट अवकाश लिनुमा सीमित रहनेछ ।
सर्वेसर्वा ओली मधेश झर्दैनन् । उनलाई मधेश र मधेशी शब्दसँग ‘एलर्जी’ छ । त्यस रोगको ओखती नयाँ दिल्लीतिर मात्रै पाइन्छ रे ! त्यसैले उनले दिल्लीमै गएर भने हुन्छ, महेन्द्रपथ अब पुनः नेपालमा फर्कियो । र, त्यसपछि उतैबाट बेइजिङको बाटो काठमाडौं फर्के हुन्छ ।
अध्यक्ष दाहाललाई सिरहा जाने रहर छैन होला । टीकापुर जान झन् आँट गरिहाल्लान् जस्तो छैन । बरु, हेलिकप्टरमा लिबाङ पुगेर गर्जे हुन्छ: दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गलत थियो । झन्डै सत्र हजार नेपालीले व्यर्थै ज्यान गुमाए । सेनाका कर्नेल र सशस्त्र प्रहरीका आईजीजस्ता सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको हत्या अपराध थियो । त्यसपछि उनले गर्ने घोषणा राजनीतिक सन्यासकै हो ।
बाटो एउटा अर्को पनि छ । टुँडीखेलमा क्षमापूजा आयोजना गरेर संविधानका तिरस्कृत धाराहरूको होमादि गर्न सकिन्छ । राजनीतिले त्यसपछि नयाँ धार पक्रनेछ । देशको आधा जनसंख्यालाई निषेधाज्ञा र कर्फ्युको बन्दी बनाएर र चालीसभन्दा बढी मधेशीको जीवन हरण ल्याइएको संविधान त्यति प्रायश्चितको कर्मकाण्डको त पक्कै हकदार छ । यो सामाग्री ईसमताबाट लिईएको हो।
नेपाल भारत सीमा २४ घण्टालाई बन्द
१५ कात्तिक, बिरगंज । भारतको बिहार राज्यमा आज हुने विधानसभा निर्वाचनका कारण रौतहट, सर्लाही, बारा र पर्साका सिमा २४ घण्टाका लागी बन्द भएको छ ।...
एसईई परीक्षा चैत ८ देखि
काठमाडौं, ५ पुस । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत आठ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार परीक्षाको ...
एप्पलले किन ल्यायो एन्ड्रोइड एप ?
आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आफ्नो पहिलो एन्ड्रोइड एप ल्याएको छ । अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको एप्पलको यो एन्ड्रोइड एपले एन्ड्रोइड फोनका प्...
सिरहा १ बाट गिरी विजयी र २ मा माओवादीका पूर्व मन्त्री दास विजयी
गोलबजार, २५ मंसिर । सिरहा १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काँगे्रसका प्रभावसाली नेता एवम् राजनीतिक बिश्लेशक प्रदीप गिरी बिजय भएका छन् । ...
व्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता ः सगरमाथाका प्रिन्सिपल तिवारी
राम नारायण पंडित सिरहा, २० माघ । अबको शिक्षा शैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक हुनुपर्ने सगरमाथा माध्यमिक बिद्यालय मिर्चैयाका प्रिन्सिपल प्रदि...
मट्टितेलमा कालोवजारी: सम्वन्धित निकाय मौन
महेश प्रसाद चौधरी सिरहा, २० साउन । मट्टितेलमा व्यापक कालोवजारी चलिरहेपनि सम्वन्धित निकाय मौन रहेका छन् । अहिले धान रोपाईको चटारो लागे पनि...
एकै व्यक्तिको तीन वटा मृत्यु दर्ता
रामबाबु यादब सिरहा । एकै व्यक्तिको फरक फरक मितिमा मृत्यु भएको उल्लेख गरी तीन वटासम्म मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र बनाएको रहस्य खुलेको छ । ...
Push 15 मार्गानुगामी राष्ट्रिय दैनिक गोलबजार नगरपालिका –६ सिरहा
मिर्चैया नगरपालिका ओडिएफ घोषणा
राम नारायण पंडित सिरहा, १२ माघ । नेपाललाई २०१७ सालसम्ममा खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र (ओडिएफ) घोषणा गर्ने राष्ट्रिय सरसफाई गुरु योजनाको भाव...
आर्काइभ Jul 24 (2) Feb 01 (5) Jan 26 (2) Jan 09 (5) Nov 26 (1) Oct 09 (1) May 16 (1) May 14 (2) Apr 29 (1) Apr 05 (1) Mar 20 (5) Mar 14 (2) Mar 13 (2) Mar 11 (1) Feb 21 (5) Feb 20 (1) Jan 27 (1) Jan 07 (4) Dec 02 (14) Nov 25 (1) Nov 21 (1) Nov 20 (1) Nov 19 (1) Nov 18 (3) Jun 10 (1) May 20 (2) May 06 (1) May 04 (1) Apr 22 (1) Apr 04 (7) Mar 26 (1) Feb 25 (5) Feb 15 (7) Feb 12 (1) Feb 08 (11) Feb 02 (6) Feb 01 (2) Jan 21 (6) Jan 19 (1) Jan 17 (1) Jan 15 (7) Jan 10 (7) Jan 04 (4) Dec 28 (4) Dec 16 (1) Dec 15 (4) Dec 11 (3) Dec 09 (1) Dec 08 (6) Dec 06 (5) Dec 03 (5) Dec 02 (2) Dec 01 (1) Nov 15 (1) Nov 11 (8) Nov 09 (8) Nov 01 (3) Oct 31 (1) Oct 28 (3) Oct 27 (2) Oct 17 (5) Oct 14 (2) Oct 08 (2) Oct 06 (7) Sep 23 (3) Sep 21 (10) Sep 18 (1) Sep 16 (2) Sep 15 (7) Sep 10 (1) Sep 02 (9) Aug 17 (2) Aug 14 (5) Aug 12 (3) Aug 10 (1) Aug 08 (3) Aug 06 (2) Aug 05 (5) Aug 03 (4) Aug 02 (3) Aug 01 (4) Jul 31 (3) Jul 28 (3) Jul 27 (2) Jul 26 (2) Jul 23 (8) Jul 18 (6) Jul 14 (7) Jul 13 (1) Jul 07 (4) Jul 05 (10) Jun 28 (4) Jun 27 (2) Jun 26 (3) Jun 25 (4) Jun 24 (2) Jun 23 (6) Jun 21 (4) Jun 18 (1) Jun 17 (2) Jun 15 (9) Jun 14 (5) Jun 12 (5) Jun 04 (5) Jun 01 (9) May 30 (2) May 29 (9) May 27 (3) May 26 (8) May 24 (8) May 21 (6) May 18 (6) May 17 (4) May 15 (5) May 14 (7) May 13 (4) May 12 (8) May 10 (1) May 09 (5) May 07 (3) May 06 (4) May 05 (1) May 03 (7) May 01 (8) Apr 30 (3) Apr 29 (2) Apr 27 (3) Apr 26 (10) Apr 25 (3) Apr 24 (5) Apr 23 (5) Apr 19 (9) Apr 17 (7) Apr 16 (4) Apr 15 (6) Apr 12 (3) Apr 11 (5) Apr 10 (2) Apr 09 (6) Apr 07 (9) Apr 05 (8) Apr 04 (4) Apr 02 (4) Apr 01 (5) Mar 30 (8) Mar 29 (1) Mar 28 (4) Mar 27 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (5) Mar 22 (5) Mar 20 (1) Mar 16 (4) Mar 13 (9) Mar 12 (2) Mar 10 (1) Mar 09 (5) Mar 07 (2) Mar 06 (4) Mar 04 (5) Mar 03 (3) Feb 28 (10) Feb 27 (2) Feb 26 (8) Feb 24 (6) Feb 22 (3) Feb 21 (2) Feb 20 (6) Feb 19 (2) Feb 18 (5) Feb 16 (6) Feb 15 (1) Feb 14 (1) Feb 13 (3) Feb 12 (5) Feb 11 (10) Feb 09 (3) Feb 08 (3) Feb 07 (4) Feb 06 (3) Feb 03 (4) Feb 02 (2) Jan 31 (9) Jan 30 (5) Jan 27 (2) Jan 26 (3) Jan 25 (3) Jan 24 (3) Jan 19 (3) Jan 18 (2) Jan 17 (6) Jan 15 (4) Jan 13 (2) Jan 12 (10) Jan 08 (2) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (1) Jan 03 (5) Jan 02 (4) Jan 01 (1) Dec 30 (5) Dec 28 (5) Dec 27 (1) Dec 26 (2) Dec 25 (2) Dec 24 (4) Dec 23 (1) Dec 22 (6) Dec 20 (4) Dec 19 (2) Dec 18 (5) Dec 17 (5) Dec 16 (6) Dec 15 (3) Dec 14 (3) Dec 13 (2) Dec 11 (7) Dec 10 (1) Dec 05 (7) Dec 03 (8) Dec 01 (4) Nov 30 (3) Nov 29 (4) Nov 28 (12) Nov 26 (5) Nov 25 (3) Nov 24 (14) Nov 23 (2) Nov 09 (7) Nov 08 (7) Nov 07 (8) Nov 06 (8) Nov 05 (9) Nov 04 (7) Nov 03 (9) Nov 02 (7) Nov 01 (11) Oct 31 (9) Oct 30 (9) Oct 29 (7) Oct 28 (5) Oct 25 (8) Oct 24 (9) Oct 23 (8) Oct 22 (9) Oct 19 (12) Oct 18 (11) Oct 17 (9) Oct 16 (9) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (8) Oct 12 (6) Oct 11 (7) Oct 10 (9) Oct 07 (9) Oct 06 (7) Oct 05 (10) Oct 04 (14) Oct 03 (10) Sep 26 (10) Sep 25 (10) Sep 24 (7) Sep 23 (6) Sep 22 (11) Sep 21 (9) Sep 20 (7) Sep 19 (20) Sep 16 (10) Sep 15 (12) Sep 14 (20) Sep 12 (19) Sep 11 (9) Sep 04 (12) Sep 03 (12) Sep 02 (10) Sep 01 (11) Aug 31 (9) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 27 (15) Aug 24 (12) Aug 22 (7) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (10) Aug 18 (10) Aug 17 (7) Aug 16 (10) Aug 15 (6) Aug 14 (8) Aug 13 (11) Aug 12 (8) Aug 11 (10) Aug 10 (8) Aug 09 (19) Aug 05 (8) Aug 04 (10) Aug 03 (7) Aug 02 (7) Aug 01 (9) Jul 31 (5) Jul 30 (6) Jul 29 (7) Jul 28 (6) Jul 27 (4) Jul 26 (4) Jul 25 (5) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 21 (10) Jul 20 (8) Jul 19 (6) Jul 18 (5) Jul 17 (10) Jul 16 (8) Jul 15 (6) Jul 14 (6) Jul 13 (4) Jul 12 (7) Jul 11 (3) Jul 10 (3) Jul 09 (5) Jul 08 (5) Jul 07 (2) Jul 06 (5) Jul 05 (7) Jul 04 (14) Jul 02 (6) Jul 01 (16) Jun 30 (12) Jun 29 (22) Jun 26 (5) Jun 25 (14) Jun 24 (14) Jun 23 (9) Jun 22 (8) Jun 21 (6) Jun 20 (7) Jun 19 (3) Jun 15 (6) Jun 14 (6) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (9) Jun 10 (7) Jun 09 (8) Jun 08 (13) Jun 07 (5) Jun 06 (8) Jun 05 (9) Jun 03 (7) May 31 (3) May 26 (6) May 23 (2) May 22 (7) May 21 (4) May 20 (5) May 19 (5) May 18 (13) May 16 (7) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (9) May 11 (3) May 10 (1) May 09 (4) May 02 (1) Apr 29 (2) Apr 28 (4) Apr 25 (3) Apr 18 (6) Apr 17 (15) Apr 16 (11) Apr 13 (3) Apr 12 (7) Apr 11 (3) Dec 29 (3) Dec 28 (2) Dec 27 (2) Nov 11 (1) Nov 10 (3) Nov 09 (3) Nov 05 (5) Nov 04 (6) Nov 03 (3) Oct 29 (2) Oct 28 (10) Oct 27 (15) Oct 26 (5) Oct 25 (5) Oct 22 (1) Oct 20 (11) Oct 19 (5) Oct 18 (16) Oct 17 (5) Oct 16 (9) Oct 15 (10) Oct 06 (4) Oct 05 (8) Oct 03 (4) Sep 24 (3) Sep 22 (10) Sep 21 (13) Sep 20 (17) Sep 19 (1) Sep 16 (13) Sep 15 (8) Sep 14 (2) Sep 13 (10) Sep 12 (7) Sep 11 (9) Sep 04 (5) Aug 29 (1) Aug 24 (1) Aug 23 (5) Aug 22 (1) Aug 21 (7) Aug 15 (2) Aug 09 (8) Aug 08 (2) Aug 07 (1) Aug 06 (1) Aug 05 (4) Aug 03 (1) Aug 01 (2) Jul 31 (1) Jul 25 (1) Jul 24 (1) Jul 13 (1) Jul 12 (2) Jul 07 (2) Jul 04 (1) Jul 02 (1) Jun 29 (2) Jun 25 (1) Jun 22 (1) Jun 18 (2) Jun 15 (1) Jun 14 (1) Jun 13 (1) Jun 10 (1) Jun 09 (1) Jun 07 (1) May 31 (1) May 29 (1) May 28 (2) May 27 (1) May 24 (1) May 23 (3) May 22 (1) May 19 (1) May 18 (3) May 17 (1) May 15 (3) May 14 (3) May 05 (1) May 04 (1) May 02 (1) Apr 30 (2) Apr 29 (2) Apr 28 (1) Apr 27 (2) Apr 24 (1) Apr 21 (1) Apr 15 (1) Apr 12 (1) Apr 07 (2) Apr 05 (2) Apr 04 (3) Apr 03 (2) Apr 02 (1) Mar 31 (4) Mar 28 (1) Mar 25 (1) Mar 24 (1) Mar 23 (1) Mar 21 (1) Mar 20 (1) Mar 19 (1) Mar 17 (4) Mar 15 (1) Mar 14 (2) Mar 13 (2) Mar 11 (1) Mar 08 (2) Mar 07 (2) Mar 05 (1) Mar 04 (1) Mar 03 (1) Feb 29 (2) Feb 27 (1) Feb 26 (1) Feb 24 (2) Feb 23 (2) Feb 22 (1) Feb 21 (3) Feb 20 (1) Feb 19 (4) Feb 18 (2) Feb 16 (4) Feb 15 (1) Feb 14 (2) Feb 10 (2) Feb 09 (3) Feb 08 (5) Feb 07 (5) Feb 06 (5) Feb 05 (4) Feb 04 (2) Feb 03 (2) Feb 02 (1) Feb 01 (5) Jan 31 (2) Jan 30 (2) Jan 29 (1) Jan 28 (2) Jan 27 (1) Jan 25 (1) Jan 24 (7) Jan 23 (1) Jan 21 (4) Jan 20 (2) Jan 19 (1) Jan 18 (1) Jan 17 (3) Jan 16 (4) Jan 15 (3) Jan 14 (3) Jan 13 (3) Jan 12 (2) Jan 11 (1) Jan 10 (1) Jan 09 (3) Jan 07 (2) Jan 06 (1) Jan 05 (1) Jan 04 (8) Jan 03 (6) Jan 02 (2) Jan 01 (1) Dec 31 (2) Dec 30 (5) Dec 29 (2) Dec 28 (3) Dec 27 (5) Dec 26 (5) Dec 25 (6) Dec 24 (1) Dec 23 (1) Dec 22 (2) Dec 21 (2) Dec 20 (4) Dec 19 (2) Dec 18 (1) Dec 16 (6) Dec 14 (2) Dec 12 (6) Dec 11 (4) Dec 10 (1) Dec 09 (1) Dec 08 (7) Dec 07 (4) Dec 06 (6) Dec 05 (1) Dec 03 (5) Dec 02 (7) Dec 01 (4) Nov 30 (2) Nov 29 (16) Nov 26 (4) Nov 25 (3) Nov 24 (1) Nov 23 (5) Nov 22 (8) Nov 21 (4) Nov 20 (5) Nov 19 (4) Nov 17 (4) Nov 13 (5) Nov 09 (9) Nov 06 (3) Nov 04 (12) Nov 03 (1) Nov 02 (6) Nov 01 (2) Oct 31 (2) Oct 30 (2) Oct 28 (1) Oct 27 (4) Oct 11 (1) Oct 03 (1) Sep 29 (3) Sep 28 (6) Sep 27 (15) Sep 26 (20) Sep 25 (29)